﻿	ငါ့ IUD ထွက်ကျလာခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ဦးမလား။ | Find My Method
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဟော်မုန်းမဟုတ်သော IUD » ငါ့ IUD ထွက်ကျလာခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ဦးမလား။
IUD ထွက်ကျလာခြင်းကို အမျိုးသမီးများ ၂-၁၀% တွင် ထည့်သွင်းပြီးတစ်နှစ်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ IUD ထွက်ကျလာခြင်းပိုဖြစ်နိုင်သော အမျိုးသမီးများမှာ :
FPA the sexual health charity. (2017). Your guide to the IUD: Helping you choose the method of contraception that’s best for you. မှရယူရန် https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/intrauterine-device-iud-your-guide.pdf